Indlu yaseOceanfront, idokhi yabucala, amanyathelo okuya eAcadia
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguBen
Le propathi yolwandle ingakholelekiyo ibikusapho lwethu izizukulwana ezine. ICaleb's Cottage yayilwa yaza yakhiwa ngo-2003 ukuze ithathe ithuba elipheleleyo lale ndawo ifanelekileyo, nokufikelela ngokuthe ngqo emanzini, kwidokhi, ukuhombisa kunye nemibono entle yezibuko. Kufutshane nesiphelo sendlela yabucala, uya kuziva uxolo lwendlela yokubaleka. Ukude nokunyuka intaba kwi-Acadia National Park, umgama oyimizuzu emi-5 ukuya kwidolophu ebukekayo yaseSouthwest Harbour, kunye nemizuzu nje engama-25 ukusuka eBar Harbor ephithizelayo.
ICaleb's Cottage inamagumbi acocekileyo, avulekileyo kwaye aqaqambileyo ajonge ulwandle, ikhitshi exhobe ngokupheleleyo kunye nazo zonke izinto zale mihla zokuphucula ukuhlala kwakho. Iwasha, isomisi, idishwasher, isitovu segesi, igrill yegesi yangaphandle, imicrowave, iTV, intambo, iDVD, isantya esiphezulu se-intanethi (i-wifi), kunye nobushushu. Ilungele abakhephe abanedokhi kunye nokufikelela kwi-moring. Amagumbi okulala amane, kubandakanywa negumbi le-bunk, lenza lilungele iintsapho kunye namaqela ukuya kuthi ga kwi-6 yabantu abadala kunye nabantwana aba-2.
Indawo ekhethekileyo kwi-peninsula encinci enezinye iipropathi ezimbalwa ezabelana ngale ndlela yabucala kwiConnor Point.
Umnini akekho kwisiza kodwa uyafumaneka nangaliphi na ixesha ngefowuni, umbhalo, i-imeyile kwaye unokuncedisa ngayo nayiphi na imibuzo okanye imiba. Umnini uya kulungiselela naluphi na uncedo lwendawo ukuba kuyimfuneko (iplumber, i-handyman, inkampani yentambo, njl njl).
Umnini akekho kwisiza kodwa uyafumaneka nangaliphi na ixesha ngefowuni, umbhalo, i-imeyile kwaye unokuncedisa ngayo nayiphi na imibuzo okanye imiba. Umnini uya kulungiselela naluph…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Southwest Harbor